mercredi, 04 décembre 2019 17:18
Oniversiten’Antsiranana: Mijaly vao mahazo karama ireo Mpiasa mpandraharaha
Tato anatin’ny herintaona izao dia mijaly vao mahazo karama ny Mpiasa mpandraharaha ato amin’ny Oniversiten’Antsiranana, ary mbola mitohy hatramin’izao. Ny olona nandeha nisotro ronono tamin'ny 2016 aza, hoy ny fitarainan’ny mpiasa, dia tsy mbola mandray vola fisotroan-dronono hatramin'izao. Rehefa nanontaniana ny tompon’andraikitra ara-bola dia nilaza fa « tsy mbola tapaka ny karaman'ireo » nefa tsy voarain'ny tompony. Mitokona ny mpiasa, mitaky ny tambin-kasasarany sy ny sosialiny. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 03 décembre 2019 21:42
Fampianarana ambony: Hifamotoana eo amin’ny « Esplanade » Ankatso ny SECES sy ny mpianatra
Hihaona amin'ireo mpianatry ny oniversiten’Antananarivo ny SECES rahampitso maraina alarobia 04 desambra mba hampahafantaran’ireto farany ny anton'ny fitakiana ataon’ireo Mpikaroka-mpampianatra sy hamaliana fanontaniana. Eo amin’ny « esplanade » Ankatso no voatondro fa hihaonan’ny roa tonta. Fa tao amin’ny Oniversiten’i Toliary dia tamin’ny alalan’ny filaharana mihodidina ny “campus” no nanohizan’ireo Mpikaroka-mpampianatra ny hetsika fitakiana, omaly, izay nofaranana tamin’ny fanaovana “sit-in” teo anoloan’ny Fiadidiana ny Oniversite ary fametrahana “banderoles”.
Ratsy ny andro ao andrefana
Mitandrema isika mpiandriaka andranomasina ao andrefana, atsimo andrefana fa misy andro ratsy miforona.
lundi, 02 décembre 2019 12:04
Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana: Mandrahona hikotona ireo mpiraki-draharahan'ny Fitsarana
Mahatsiaro ho zanak’ikalahafa ireo Mpiraki-draharahan'ny Fitsarana miasa eny anivon’ireo Fitsarana misahana ny ady amin’ny Fanjakana miisa enina eto Madagasikara, amin’ny fisahanana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna notontosaina ny alarobia 27 novambra 2019 nanerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. « Samy miasa mafy na ny mpitsara na ny mpiraki-draharaha nefa ampahafolon’ny tambinkarama omena ny mpitsara ny omena ny mpiraki-draharaha amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana kaominaly. Tsy miady hitovy amin’ny mpitsara ny mpiraki-draharaha fa farafaharatsiny mba antsasany fa tsy ampahafolony, satria tsy nampandraisina anjara tamin’ny fanapahana ny fitsinjarana ny tambinkarama ny Mpiraki-draharaha », hoy ny fanazavana azo. Mandrahona ny hitokona ireo mpiraki-draharahan'ny Fitsarana amin’ny alakamisy 5 desambra 2019 izao, manoloana io tranga io. Nanao fampahafantarana ny hisian’io fitokonana io izy ireo tamin’ity andron’ny alatsinainy 2 desambra 2019 ity.
lundi, 02 décembre 2019 11:41
Governoran'ny Faritra: Miofana any Chine ny ankamaroany
Any Chine mandray anjara amin'ny "Séminaire de haut niveau sur les Responsables des Gouvernements locaux" ireo Governoran'ny Faritra eto Madagasikara. Haharitra dimy ambin'ny folo andro, ny 2 ka hatramin’ny 15 desambra 2019, ity seminera ity, izay ry zareo Sinoa no miantoka ny fandaniana rehetra amin’izany. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 02 décembre 2019 11:28
Governora: Hiisa 23, ary hanana tetibola 5.0 miliara Ariary isanisany
Miisa 23 ny Governora (Faritra) raha ny voarakitry ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2020, na tsy mbola misy didim-panjakana vaovao mamaritra ho 23 ny isan’ny Faritra aza. Samy hahazo tetibola 5 miliara Ariary isanisany ireo Governora manerana ny faritra telo amby roapolo (23), ka hatokana ho amin’ny fandaniana ho hanapamokarana ny 4 miliara Ariary ao anatin’izany ary ho amin’ny fandaniana ho fampandehanan-draharaha ny 1 miliara Ariary.
lundi, 02 décembre 2019 11:14
Kaominina ambohivohitra Antsohihy: Nivoaka mpandresy ny kandida Nasiry Ali
Raha ny vokatra vonjimaika navoakan’ny SRMV dia nandresy ny kandida tsimiankina Nasiry Ali tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto amin’ny Kaominina ambohivohitra Antsohihy natao ny 27 novambra 2019 teo. Mitarika kosa ny lisitra IRD amin’ny fifidianana mpanolontsain’ny tanàna. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 01 décembre 2019 14:41
Vinaninkarena – Antsirabe: Kandida any am-ponja no mitarika vonjimaika tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna
Miisa 11 ireo kandida Ben’ny tanàna nifaninana tato amin’ny Kaominina Vinaninkarena, Distrikan’Antsirabe II, Faritra Vakinankaratra. Anisany ny Ben’ny tanàna farany, izay nirotsaka amin’ny anaran’ny tsy miankina. Tsy nanomboka akory ny fampielezan-kevitra dia voatazona am-ponja vonjimaika ity kandida ity, noho ny raharaha nahavoarohirohy azy ara-pitsarana. Izy no mitarika vonjimaika amin’ny voka-pifidianana tao amin’ity Kaominina Vinaninkarena amin’ny voka-pifidianana notanterahina ny alarobia 27 novambra 2019 teo.
Kaominina 8 no tsy nisy lisitra mpanolotsaina nirotsaka hofidiana ary tsy nanatanterahana fifidianana Mpanolotsaina. Tsy maintsy hisy ny fifidianana amin’ny ampahany amin’ireny kaominina ireny, araka ny fanazavan’ny filoha lefitry ny CENI Rakotonarivo Thierry. Ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no hanao ny fanamarinana ny fahitana fototra ny fahabangan-toeran’ireo mpanolotsaina ireo, ary 120 andro aorian’izay farafahatarany no tsy maintsy atao ny fifidianana amin’ny ampahany.
Araka ny tatitra vojimaika nataon’ny CENI, dia Biraom-pifidianana 20 amin’ireo 25 388 manerana ny nosy, no tena nahitana tsy fahatomombanana, ary saika voavaha ara-potoana ny olana. 2 amin’ireo 25 388 ireo kosa no tsy nisy latsabato. Nilaza ny CENI fa vitsy noho izay novisavisaina ny tsy fahatomombanana amin’ny ankapobeny.